जनार्दन शर्माले भन्नू भयो प्रदेश भंग गरौं!
पूर्वगृहमन्त्री एवम् ने,कपा सांसद जनार्दन शर्मा (प्र,भाकर)ले संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास नभएको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति केन्द्रबाट अविश्वासपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै उनले आ,क्रोश पोखे ।
राज्य व्यवस्था तथा सु,शासन समितिको आइतबारको बैठकमा आ,क्रोशित हुँदै शर्माले संघीयता कार्यान्वयनको बाटो नखोल्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह भं,ग गरिदिए हुने बताए ।
बैठकमा संघीय नि,जामती सेवा विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अ,धिकृत संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विषयमा छलफल भए पनि टुं,गो नलागेपछि समितिको बैठक यही चैत पाँच गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
समिति सचिवालयले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्र,शासकीय अ,धिकृत सम्बन्धित तहको हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यो विषयमा आफूले रा,जनीतिक तहमा पनि छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै थप समय मागेका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै ने,कपा सांसद शर्माले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहकै हुनुपर्ने भन्दै समितिले ल्याएको प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले यो प्रस्तावको वि,रोध गर्नेहरु संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार नभएको समेत बताए ।
“एमसीसी सम्झौता मैले गरेको हुँ”,, यो देशको हितमा छ’: पुर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ,, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
नेकपा एमालेले कुनै पनि हा,लतमा ए,मसीएसी पास गर्न नदिने,,, ताली या गा,ली?
बालुवाटार बैठक : MCC खारेज नभए पछि गठबन्धन छाड्ने चित्रबहादुर केसीको चेतावनी
केपी ओलीले एमालेमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ : घनश्याम भुसाल
ओलीलाई आश्चर्य चकित पार्ने माधव नेपालको प्रस्ताव, खुशीले फुरुगं छन् झलनाथ